भीमेश्वर नगरपालिका वडा कार्यालयमा तालाबन्दी - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
भीमेश्वर नगरपालिका वडा कार्यालयमा तालाबन्दी
भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं. १ वडा कार्यालयमा तालाबन्दी भएको छ । भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुर्न निर्माणका लागि पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट खटाएका इन्जिनियर लगायतका प्राविधिकहरु गाउँमा नजाने र वडा कार्यालय समेत सदरमुकाममै सञ्चालन भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले चरिकोटमा रहेको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो ।
प्राधिकरणबाट एक वर्ष अघिदेखि गाउँमा इन्जिनियरहरु खटाए तापनि इन्जिनियरहरु गाउँमा नबस्ने गरेको बताए । ‘गाउँमा राज्यबाट तलबभत्ता खाने इन्जिनियरहरु जाँदैनन्’ नेकपा माओवादी केन्द्र भीमेश्वर नगरपालिका १ का संयोजक बुधमान थामीले भने ‘भुकम्प पीडितहरुले आफू खुशी बनाएको घर पनि मापदण्ड मिलेन भन्दै सिफारिस नगर्ने गरेको आरोप लगाए ।’ प्राधिकरणका प्राविधिकहरुले नियमित अनुगमण र परामर्श नदिंदा भुकम्प पीडितले बनाएका घरलाई समेत सिफारिस नगर्दा ३ सय जना भन्दा बढी पीडितहरु दोस्रो किस्ता लिनबाट वञ्चित भएका छन् ।
कहिलेकाँही जाने इन्जिनियरले अनुगमन गरी मापदण्ड अनुसार मात्र भएकोमा ३१ जनाको मात्र दोस्रो किस्ता लिन योग्य भएका छन् । ३ सयभन्दा बढीको घर निर्माण पूरा भए तापनि २ सयको पनि निरीक्षण गरेको छैन । निर्माण पूरा भएका घरको निरीक्षण गर्नका लागि पटक पटक फोन गरेर बोलाउँदा समेत फोन स्वीच अफ गरेर बस्ने र बेवास्था गर्ने गरेको स्थानीयहरुको आरोप छ ।
साविकको सुस्पा क्षमावती गाविस स्थानीय तह पुर्नसंरचनापछि भीमेश्वर नगरपालिकामा गाभिएर वडा नं. १ भएको छ । तर वडा कार्यालय अहिले पनि वडा कार्यालय चरिकोट बजारमा सम्पर्क कार्यालयको रुपमा सञ्चालित छ । भीमेश्वर नगरपालिको अरु वडाहरु भने नगरपालिका कार्यालयमै रहेको छ ।